किन मान्छेहरू अश्लिल कुरामा बढी चासो राख्छन् ? | सुदुरपश्चिम खबर
किन मान्छेहरू अश्लिल कुरामा बढी चासो राख्छन् ?
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : अशोज २५, २०७८
‘यौन हिंसा बढेको’ भन्दै सरकारले अहिले अश्लिल साइट (पोर्न साइट)माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । अश्लिल साइट बन्द गरिएपछि यौन हिंसाको दर र प्रवृत्ति फेरिएको छ ? यसको छुटै समीक्षा होला । २१ औं सताब्दीका विचारक ओशोले भने यौन र त्यसको प्रवृत्तिलाई फरक ढंगले परिभाषित गरे ।
तर, कुरा ठिक उल्टो छ । ओशो भन्छन्, ‘यो पोस्टर कसले हेर्छ ? यस्तो पोस्टर हेर्न को जान्छ ? पोस्टर हेर्न त्यही व्यक्ति पुग्छन् जसले स्त्री–पुरुषको शरीर देख्न सक्दैनन् । जसले शरीरको सौन्दर्य देख्न सक्दैनन् । जो शरीरको सहजता अनुभव गर्न सक्दैनन् ।’
यो माग हामीले पैदा गरेका हौं । स्त्री र पुरुषलाई अलग गरेर हामीले त्यो माग पैदा गरिदियौं । अब त्यही माग पुरा गर्न कोही जाँदैछ भने हामीलाई लाग्छ कि गडबड भइरहेको छ । हामी उसको बाटोमा बाधा पु¥याउँछौं । जतिसुकै बाधा पु¥याएपनि उसले अर्को बाटो खोज्न थाल्छ ।
क्याप्चा हल गर्नुहोस् * + 67 = 75